कोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरनाक ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरनाक ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरनाक ?
एजेन्सी, ३१ वैशाख । विश्वभर महामारी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरा हुन सक्ने जनाइएको छ । यद्यपि यस प्रश्नको उत्तर धेरै प्रकारको अध्ययन पछि मात्र पुष्टि हुन सक्छ, तर विज्ञहरूले यी केही तथ्याहरूको आधारमा उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छन्।
बेलायतमा १७ हजार मानिसहरुमाथि गरेको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ की जो मान्छेमा मोटोपन धेरै छ तिनीहरुको मृत्युदर ३३ प्रतिशतले बढि रहेको छ । अर्को दोस्रो अध्ययनमा मोटो मानिसहरुको मृत्यृदर दुई गुणा बढी भएको पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार मोटो मान्छेलाई मुटु रोग र सुगर जस्ता रोगहरुले पनि चाँडै आक्रमण गर्ने गर्छ ।
बेलायतको आईसीयूमा भर्ना भएका ३४.५ प्रतिशत विरामीहरुमाथि गरेको एक अध्ययनमा ३१.५ प्रतिशत मोटा थिए भने २६ प्रतिशत बिरामीहरु सामान्य थिए । शरीरको तौल र लम्बाईको अनुपातलाई बीएमआई भनिन्छ । बीएमआईबाट व्यक्तिको बढी तौल, मोटो र स्वस्थ्य भएको पत्ता लगाएको छ ।
वल्र्ड ओबोसिटी फेडरेशनले जुन मान्छेमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेको छ ती मध्ये बढी बीएमआई २५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको जनाइएको छ । अमेरिका, इटली र चीनमा सुरु भएको अध्ययनले पनि अधिक बीएमआई एक मुख्य कारण रहेको पत्ता लगाएको छ । यसको अलावा धेरै उमेरको मानिसहरुमा पनि कोरोना संक्रमणको गम्भीर रुपको बिरामी हुनेको जोखिम हुनसक्ने बताइएको छ ।
मोटो मानिसहरुको लागि कोरोना के बढी खतरनाक हुन सक्छ ?
तौल धेरै हुने ब्यक्तिको शरीरमा रगतसम्म अक्सिजन पु¥याउन गाह्रो हुन्छ र रगतको प्रवाह राम्रोसंग नभएपछि मुटुमा असर पुग्छ ।
यूनिभर्सिटी अफ ग्लासगोका प्रोफेसर नविद सत्तारले बढी तौल भएको मान्छेलाई धेरै अक्सिजनको आवश्याक पर्ने भन्दै यसले मानिसको शरीरमा धेरै तनाव हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा त्यस्तो व्यक्तिमा हुन सक्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै अर्को यूनिभर्सिटी अफ रिडिङका डाक्टर ड्यान सेलायाका अनुसार अधिक तौल भएकरो शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई अक्सिजनका कमीसंग जुध्न पर्छ । अधिक तौल भएको व्यक्तिले किड्नीको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।
मोटो मानिसहरुमा कसरी संक्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ ?
वैज्ञानिकले कोशिकाहरुमा रहेको दुई वटा एन्जाइमहरु कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने मुख्य बाटो रहेको जनाएका छन् । यो एन्जाइम मोटो मानिसहरुको सेलमा ठूलो मात्रामा फैलिएको हुन्छ ।
त्यसैले जसको धेरै तौल छ तिनीहरुमा फ्याट सेल हुन्छ र तिनीहरु कोरोनाको संक्रमित हुने खतरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
कम्पनी टाट पल्टिएपछि संसारकै महंगो घर कौडीको भाउमा लिलामी, हेर्नुहोस् भित्रका तस्वीरहरु
आजबाट काठमाडौंमा लकडाउन कडा : गल्लीमा हिड्नेलाई पक्राउ गर्ने
सल्यानमा अर्काे घटना : श्रीमान बिदेश, श्रीमती २ वर्षीय छाेरासहित सम्पर्क बिहिन